चीन फोर-वे मल्टी शटल कारखाना र निर्माताहरू जानकारी
१. चार तर्फी मल्टि शटल एक बौद्धिक ह्यान्डलिंग उपकरण हो, डिब्बे वा डिब्बा भण्डारणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो एक कुशल प्रणाली हो जसले छिटो र सटीक क्रमबद्ध र पिक-अप कार्य सक्षम गर्दछ, ठाउँ बचत गर्दछ र लचिलोपनमा।
२ फोर-वे शटल सिस्टमलाई जानकारी दिनुहोस् मल्टि-टियर र्याकिंग, फोर-वे मल्टि शटल, फ्रन्ट क्याच कन्भेर, लिफ्टर, पिकि Station स्टेशन र सफ्टवेयर प्रणाली शामिल छ। प्रत्येक तहको फ्रन्ट कन्भेयरले शटलको साथ समान तहमा सहयोग गर्दछ। प्रत्येक स्तर र्याकिaएक शटल संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ, वा धेरै स्तरहरु एक शटल साझा। गल्ली अन्तमा बहु-कार्यात्मक कम्पोजिट लिफ्टर, शटलको स्तर परिवर्तन गर्न सक्दछ, अगाडि कन्वेयरलाई सामानहरू पुर्‍याउन सक्छ.
3। फोर-वे मल्टि शटल स्वचालित भण्डारण प्रणाली विशेष गरी ई-वाणिज्य उद्योग र अटोमोबाइल उद्योगको लागि उपयुक्त छ।
1 स्वचालित एकल इनबाउन्ड होस्ट कम्प्युटरबाट निर्देशन स्वीकार गर्दै स्वचालित रूपमा ईनबाउन्ड बफर क्षेत्रमा निर्दिष्ट स्थानमा बाकस पुर्‍याउँछ।
2 स्वचालित एकल आउटबाउन्ड होस्ट कम्प्युटरबाट निर्देशन स्वीकार गर्दै, निर्दिष्ट स्थानमा आउटबाउन्ड अन्त्यमा बक्स पठाउँदछ।
3 स्वचालित रूपान्तरण होस्ट कम्प्युटरबाट निर्देशन स्वीकार गर्दै, निर्दिष्ट स्थानबाट अर्कोमा बक्स पठाउँदछ।
4 अनलाइन चार्ज गर्दै बहु-स्तर पावर थ्रेसोल्ड नियन्त्रण, आत्म-निर्णायक र लाइनमा स्व-चार्जिंग।
6 कार्य व्यवस्थापन कार्य मार्ग समाधान गर्न कार्य निर्देशनहरू स्वीकार्नुहोस्।
7 रिमोट प्रकार्य यो टाढाबाट प्रोग्राम अपडेट गर्न र डाउनलोड गर्न सक्षम छ (वाइफाइ नेटवर्कमा)।
8 प्रणाली अनुगमन वास्तविक समयमा प्रणाली डेटा मोनिटर गर्दछ र अलार्मलाई आवाज र प्रकाशमा बढाउँदछन् असामान्य स्थितिमा।
9 मुटुको धडकन जाँच मुटुको धडकन जाँच, अनलाइन स्थिति अनुगमन गरेर वास्तविक समयमा कम्प्युटर नियन्त्रण प्रणाली होस्ट गर्न संचार गर्नुहोस्
10 आपतकालिन रोक्नुहोस् आपतकालिन सिग्नल टाढा बाट पठाइयो जब आपतकालिन, र शटल तुरुन्त रोकिन्छ जब आपतकालिन उठाईन्छ
यो उपकरण वा सामान ग्यारेन्टी गर्न सक्षम छ अधिकतम गिरावटमा सुरक्षित रूपमा रोक्दछ जब यो यस निर्देश कार्यान्वयन गर्दछ।
Four कुन-कुन सामानहरू फोर-वे मल्टी शटल भण्डारण प्रणालीका लागि उपयुक्त छन्?
सामान प्याकेज प्रकार: डिब्बे, कार्टन, टट्स र आदि।
सामान आयाम (मिमी): चौडाई २००-6-600 मिमी, गहिराई 200-800mm, उचाई 100-400mm
राम्रो वजन: <= k 35 किलो
अपरेशन उचाई: <= १m मिटर
AS AS / RS भन्दा बढि क्षमता 3-4- times पटक।
- सानो डिब्बा, कार्टनहरू, ढोका भण्डारण, पिकि,, पुनःपूर्ति कार्यका लागि उपयुक्त उपयुक्त।
Flex यो कुनै पनि चरणमा थप शटल थप्न र व्यापार आवश्यकता अनुसार प्रणाली थ्रूपुट सुधार गर्न सम्भव छ।
Production अस्थायी भण्डारण र उत्पादन लाइन को छेउमा समर्थन अपरेशन को लागी एक कुशल समाधान।
Insबिन्स / डिब्बाहरू लम्बाई ____mm ​​x चौडाइ xmm उचाइ___mm ​​x वजन _____kg।
Nआउन्डबाउन्ड र आउटबाउन्ड दक्षता: डिब्बा / डिब्बा प्रति घण्टाको मात्रा _____।
फोर-वे मल्टी शटल डेलिभरी अघि परीक्षण गरिनेछ। ईन्जिनियरले साइट वा अनलाइन सम्पूर्ण प्रणालीको परीक्षण गर्दछ।
अघिल्लो: अटिक शटल
अर्को: फोर-वे रेडियो शटल